Ithegi: Iimpawu zokukhangela | Martech Zone
Ithegi: Iimpawu zokukhangela
Iimpawu zokukhangela: Ishishini, iqonga ledatha eliqhutywa yidatha
NgoLwesine, Aprili 21, 2016 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 22, 2016 Douglas Karr
Zininzi izixhobo ze-SEO ezikhoyo kunye nezikhukula ngakumbi kwintengiso rhoqo ngenyanga. Ingxaki kwisininzi kwezi zixhobo kukuba zijolise kwiimetriki ekusenokwenzeka ukuba zazibalulekile kwiminyaka eyadlulayo, kodwa azisekho. I-Searchmetrics lishishini, iqonga ledatha ye-SEO eqhutywa kukuvela kwaye ihambise iziphumo kubaxumi bayo-kwilizwe liphela. Isalathiso seinjini yokukhangela zanamhlanje kunye nenqanaba leWebhu esoloko isanda ngokukhawuleza nangokuchanekileyo ngakumbi kunangaphambili. Baye bavela
Ukucela ukungeniswa kwakho kwizixhobo ze-SEO zeNgxelo yoHlahlelo
Lwesine, ngoFebruwari 12, 2015 Lwesine, ngoFebruwari 12, 2015 Douglas Karr
Besisebenza nzima kutsha nje sidibanisa ingxelo yohlalutyo ngokubanzi kurhulumente, ezembali kunye nezona ndlela zilungileyo zangoku xa kusenziwa ukusebenza kweinjini yokukhangela. Umzi-mveliso uqhushumile kule minyaka idlulileyo kodwa uguqulwe wajongiswa ezantsi kwisibini sokugqibela. Siyakholelwa ukuba kusekho ukudideka okuninzi neenkampani kwinto esebenzayo, engasebenziyo, ngubani wokubonisana naye kunye nezixhobo ezikhoyo. Izixhobo ziya kuba yinto ephambili kwifayile yethu